Fanaterana voninkazo any Moskoa. Mividiana fehezam-boninkazo ho an'ny mpamorona
Fehezam-boninkazo miloko marevaka misy raozy 9 Aqua, alstroemeria fotsy 5, iris manga 7, solidago mavo 6, grefy salalà 1/2 fonosana amin'ny taratasy asa-tanana.
4700 Fehezam-boninkazo "Florida"
Fon-kira misy raozy fanosotra 51 an'ny karazana "Taleya".
9250 Fonosan'ny raozy (raozy 51)
minigerbera 5, lisianthus 3, alstroemeria 3, bush rose 3, pistachio, salal, harato
rose aqua 9, orchid 8, alstroemeria 3, ozatamnus 3, salal 1 fonosana, taratasy asa-tanana.
5860 Fehezam-boninkazo "Fihetseham-po ambony"
Fehezam-boninkazo misy raozy mena 40 ary fotsy iray.
5450 Fehezam-boninkazo raozy (raozy 41)
Fehezam-boninkazo daisy kely 25 pcs, tulips mavo 16, kofehy
6650 Fehezam-boninkazo daisy sy tulip mavo "Mamiratra"
3950 Box misy voninkazo sy vatomamy "Janie"
Haron'ireo raozy miisa 51 mavo miaraka amin'ny maitso haingon-trano ao anaty harona.
13550 Haron'ny raozy "Masoandro" (raozy 51)
Frezy vaovao 1 kg. - PC 1. Tish taratasy - 1 pc. Harona - 1 pc.
Ny fehezam-boninkazo frezy dia fanomezana tsy mahazatra sy mihoampampana ary tsy hay hadinoina. Tsy tsara tarehy fotsiny izy io, fa mahasalama sy matsiro ihany koa.
5598 Fehezam-boninkazo Strawberry
4250 Fehezam-boninkazo laharana 71
5750 Fehezam-boninkazo laharana 72
Marshmallow - fehezam-boninkazo
4150 Fehezam-boninkazo laharana 104
4950 Fehezam-boninkazo laharana 101
Fanaterana fehezam-boninkazo any Moskoa miaraka amin'i Floristum.ru
Floristum dia serivisy amin'ny fanafarana voninkazo any Mosko sy eran'i Russia.
Ao amin'ny Floristum.ru dia azonao atao ny manafatra fehezam-boninkazo amin'ny fandefasana any amin'ny birao na tranonao any Mosko avy amin'ny tamba-jotra federaly misy fivarotana voninkazo miaraka amin'ny tahan'ny kalitaon'ny vidiny tsara indrindra. Aza adino fa ny mora dia tsy mandeha tsara amin'ny hatsaran-tarehy sy ny freshness. Fa ny vidinay, fehezam-boninkazo izay hatolotra anao, dia hahafaly anao. Ampitahao ireo tolotra mitovy amin'ny mpamorona florist sy fivarotana atolotra ao amin'ny Floristum any Moskoa na tanàna hafa tianao.
Amin'ny alàlan'ny fandefasana fehezam-boninkazo miaraka amin'ny fandefasana any Moskoa any an-tranonao na any amin'ny biraonao - ianao, na ilay olona tianao ho gaga, dia azo antoka fa hahazo firavaka voninkazo vaovao sy voaravaka amin'ny adiresy voatondro sy ao anatin'ny fe-potoana voafaritra.
Ilay mpandefa hafatra dia hanolotra ny fehezam-boninkazo miaraka amin'ny tsiky, feo arahaba, raha tianao, ny anaran'ny mpandefa, ary koa maka sary ny fotoana fandefasana, miaraka amin'ny fahazoan-dàlan'ny mpandray, mazava ho azy Ny serivisy fanaterana voninkazo dia misy isan'andro sy amin'ny tanàna rehetra amin'ny firenena!
Ny talen'ny fitantanana voninkazo sy ny mpivarotra voninkazo efa za-draharaha dia liana aminao, amin'ny maha-mpividy anao sy ny mpakafatrao, afa-po, mamela ny valiny tsara ary mankasitraka ny asa vita amin'ny pejin'ilay tranonkala. Misy fiatraikany amin'ny laharan'ny magazay sy ny mpivaro-boninkazo ny isa navoakan'ny mpanjifa, izay mamaritra ny fahita matetika amin'ny famoahana voninkazo avy amin'ireo mpivarotra voninkazo.
Ny filaharan'ny voninkazo tsirairay ao Moskoa dia arovan'ny rafitra hatsaran-tarehy Floristum miaraka amin'ny antoky ny famerenana eo noho eo ny vola aloa amin'ny mpividy raha misy force majeure. Manara-maso akaiky ny asan'ny magazay izahay, koa raha misy ny fifanolanana dia manorata amin'ny serivisinay amin'ny adiresy voalaza ao amin'ilay tranonkala.
Rehefa mandoa amin'ny tranokala mampiasa karatra banky ianao dia tsy ampidirina amin'ny kaontinao ny vola, fa mivaingana amin'ny takelaka fandanjalanjana, mamela anay hiantoka haingana izany rehetra izany na ny ampahany amin'ny vola tsy misy kaomisiona sy fatiantoka vonjimaika raha sendra tranga tsy ampoizina rehefa manefa ny adidintsika na dia ny 14 sy 8 febroary aza Marta. Azonao atao ny mangataka fangatahana ao anatin'ny 3 andro.
Miara-miasa amin'ny orinasa ara-dalàna amin'ny alàlan'ny famindrana banky koa izahay
Ny fehezam-boninkazo miaraka amin'ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny famindrana banky amin'ny orinasa ara-dalàna, ho an'ny mpiasa ao amin'ny fikambanana, ny mpanjifany miaraka amin'ny fandefasana any amin'ny birao sy trano dia iray amin'ireo sehatra lehibe amin'ny asanay. Azonao atao ny manafatra fehezam-boninkazo an'ny mpanoratra amin'ny alàlan'ny fandefasana any Moskoa dieny izao, ary mandoa amin'ny kaontin'ny banky fikambanana ara-dalàna!
Manome fonosana feno ny antontan-taratasy famaranana ho an'ny entana novidina taminay izahay. Vakio bebe kokoa ao amin'ilay faritra fanaterana fehezam-boninkazo amin'ny alàlan'ny famindrana banky any Mosko